साइकलयात्राको समाजशास्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रत्येक साइकल यात्रीसँग उसको पारिवारिक सम्बन्ध सडकमा दगुरिरहेको हुन्छ । सडक दुर्घटनाले व्यक्ति, परिवार, नातागोता, समुदाय हुुँदै समाजसम्म प्रभाव पार्छ ।
पुस १, २०७५ नरेन्द्र मिश्र
काठमाडौँ — डेढ महिनाअघि कीर्तिपुरस्थित ल्याबरोटरी स्कुलअगाडि बल्खु–दक्षिणकाली सडक किनारमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले खुलै छाडेको खानेपानी च्याम्बरमा खसेर काठमाडौं महानगरपालिका–१५ चागलका साइकलयात्री श्यामसुन्दर श्रेष्ठको मृत्यु भयो । साइकल स्ल्याबमा ठोक्किएर उछिट्टिँदा श्रेष्ठ च्याम्बरमा खसेका थिए ।
एक सातापछि घटनास्थलमा श्रेष्ठको सम्झनामा राखिएको सेतो साइकल र त्यसमा उनकी दिदी शुभद्राले फूल चढाउँदै गरेको तस्बिर गत कात्तिक १८ गते कान्तिपुर दैनिकको मुखपृष्ठमा छापिएको थियो । त्यस दिन दिदी शुभद्रा, आफन्त र केही साइकलयात्रीले श्रद्धाञ्जलीसभा आयोजना गरेर सेतो साइकलमा फूल चढाएका थिए ।
ती घटना, सेतो साइकल र श्रद्धाञ्जलीसभाले दु:खद, मार्मिक र सांकेतिक छन् । तिनले खबरदारीपूर्ण सन्देशसमेत दिएका छन् । यो र यस्ता प्रकृतिका साइकल दुर्घटनाले हामीमाझ थुप्रै प्रश्न जन्माएका छन् ।
साइकलयात्रीले कस्ता खालका समस्या भोग्दै आएका छन् ? किन साइकलयात्रीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ ? के हाम्रा सहरमा साइकलयात्रालाई निम्नवर्गको सवारीसाधनका रूपमा मात्र हेरिन्छ ? सडकमा साइकलयात्रीलाई वर्गीय असमानताको व्यवहार गरिन्छ कि गरिँदैन ?
राजधानीका मुख्य सडकहरू प्राय: व्यस्त रहने गर्छन् । सडकमा प्राय: दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनले बाक्लै गरी एकपछि अर्कोलाई पछयाइरहेका हुन्छन् । बेलाबखत साइकलयात्रीलाई दगुरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ । पैदलयात्रीले दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने छँदै छ । सडकहरू प्राय: साँघुरै छन् । सवारीसाधनको संख्या दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ ।
उपत्यकामा प्रत्येक दिन करिब ३५४ वटा नयाँ सवारीसाधन थपिन्छन् । मोटरसाइकलको कुरै नगराैं । ११ लाखभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । प्रतिदिन सवारीसाधन थपिँदै जाँदा यहाँका सडकको आकार र संख्या भने लगभग विगतकै अवस्थामा छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा साइकलयात्रालाई त्यति सहज सवारीसाधनका रूपमा लिएको पाइँदैन । यसका पछाडि धेरै कारण छन्– साइकलमैत्री भौतिक संरचनाको कमी, व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, पँुजीवादी जीवनशैलीको प्रभाव, समयको सीमितता, बदलिँदो सहरिया जीवनशैली, नयाँ सामाजिक मूल्य र मान्यता आदि ।
साइकलयात्राबाट गन्तव्यमा पुग्न लामो समय लाग्ने र यो विशेषत: निम्नवर्गले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन हो भन्ने गरिन्छ । समग्रमा साइकलयात्राबाट बेफाइदाभन्दा पनि फाइदा बढी भएको देखिन्छ । विभिन्न मुलुकमा गरिएको अध्ययनअनुसार यसले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष फाइदा गर्छ ।
जस्तो कि कुनै व्यक्तिले दैनिक ३० मिनेट प्रतिदिन साइकलयात्रा गरे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उदासीनताका साथै अन्य सामान्य शारीरिक रोग कम गर्न ४० प्रतिशत मद्दत पुग्छ भनिन्छ । पछिल्लो ब्रिटिस मेडिकल जर्नलको एक अनुसन्धानअनुसार नियमित साइकल चलाउनाले क्यान्सरको खतरा ४५ प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ । यसले वातावरण सन्तुलन, सहरको प्राकृतिक सौन्र्दय, इन्धनको बचत, वायु प्रदूषणमा कमी, ट्राफिक जाममा कमी र कम खर्चिलो सवारीसाधन यसका मुख्य विशेषता नै हुन् ।
साइकल र बदलिँदो जीवनशैली
राजधानी सहर, पुँजीवाद उन्मुख जीवनशैली र साइकलयात्राको सम्बन्ध एकअर्कामा जेलिएको छ । यसको अर्थ पुँजीवादले मानिसको आम्दानीको स्रोत, साइकल, दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनको उपभोगलाई प्रभाव पार्छ भन्ने हो ।
यी सवारीसाधनको प्रयोगलाई हाम्रो बदलिँदो समाजमा वर्गीय हैसियताका रूपमा पनि हेरिने थालेको छ । साइकलबाट मोटरसाइकल र मोटरसाइकलबाट चारपांग्रे गाडीसम्मको चाहनामा वर्गीय रूपान्तरण हुनु यसको एक उदाहरण हो । सैद्धान्तिक रूपमा यो हुनु स्वाभाविक पनि होला । सहरमा साइकललाई दैनिक सवारीसाधानका रूपमा प्रयोग गर्नु निम्नवर्गीय पारिवारिक हैसियतको संकेत मात्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ ।
के हामी साइकल संस्कृति अँगाल्न सक्छौँ ? के हामी चलाइरहेको मोटरसाइकल त्याग्न सक्छौँ ? यसमा सक्ने र नसक्ने व्यक्तिका आआफ्नै कारण होलान् । यसमा व्यक्ति, परिवार, पेसा, लिंग, समय, सामाजिक हैसियतका साथै आर्थिक अवस्थाले प्रभाव पार्दैन भन्ने छैन तर किन हाम्रो सहरिया जीवनशैलीमा साइकल उपयोगी भइरहेको छैन भन्ने मुख्य सवाल हो ।
तसर्थ साइकलयात्रा र मोटरसाइकल/चारपांग्रेयात्राबीचको सम्बन्धलाई पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिकका साथै पँुजीवादको बढ्दो प्रभावलाई समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनभन्दा साइकलयात्रीले आफ्नो शारीरिक क्षमता/शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । सडकको किनारबाट च्यापिएर यात्रा गर्नुपर्छ, धुवाँधुलोले प्राय: सधैँ पिरोल्छ र ठूला सवारीसाधनका सहचालक/चालकबाट गरिने निम्नस्तरको व्यवहार सहनुपर्छ । यो अवस्था र मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
विशेषत: सहरमा मध्यमवर्गले भागदौडको जिन्दगी, व्यस्तताका कारण दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई अनिवार्य ठानेको हुन सक्छ । साइकलयात्रालाई सबै वर्ग, लिंग र उमेरमा लानका प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । केही पश्चिमा मुलुकमा ‘साइकल सहर’ का रूपमा विकास गरिएका छन् । हामीलाई साइकल सहर बनाउन केले रोकेको छ ?
काठमाडौं उपत्यकामा २०७० सालपछि ३३ जना साइकलयात्रीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको देखिन्छ । साइकल दुर्घटना किन हुन्छन् ? दुर्घटनाको दोषी को ? सामान्यतया साइकलयात्री दुर्घटनामा पर्नुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् ।
तैपनि यसलाई दुइटा पाटाबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, साइकलयात्रीको यात्राको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको पाइन्छ । दोस्रो, साइकल लेन अभाव, अव्यवस्थित सडक, खाल्डाखुल्डी, ठूला सवारीसाधनको चाप आदि ।
प्रत्येक साइकलयात्रीसँग उसको पारिवारिक सम्बन्ध पनि सडकमा दगुरिरहेको हुन्छ । यसको अर्थ सबै यात्रीमा पारिवारिक सम्बन्ध, आशा, भरोसा, अपेक्षा र संघर्ष पनि जोडिएको हुन्छ । सडक दुर्घटना र मानवीय क्षतिले व्यक्ति, परिवार, नातागोता, समुदाय हुँदै समाजसम्म प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
व्यक्ति, घरपरिवार र आफन्तले यस्ता घटना बिर्सन सकिरहेका हुँदैनन् । पारिवारीक सदस्य गुम्दाको पीडा र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावले परिवारलाई लामो समयसम्म पछ्याइरहेको हुन्छ ।
सहरमा साइकलयात्रा बढाउनु भनेको स्वस्थ र सुरक्षित रहनु तथा वर्गीय सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो । चिल्ला गाडी, बस, माइक्रोबस, मोटरसाइकलजस्ता सवारीसाधनको संख्या बढ्नु मात्र सहरको पहिचान होइन । तिनीहरूको सहज, सरल, व्यवस्थित र सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सडक दुर्घटनामा कुनै नागरिकको ज्यान गुम्ने अवस्था रहनु हुँदैन । त्यसका लागि साइकल सहरको परिकल्पना विकल्प हुन सक्छ । साइकल संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न साइकल सडक संरचनाको विकास, साइकल लेन, साइकलबिसौनीका साथै सर्वसाधारणमा साइकलको पहुँच अभिवृद्धि, प्रोत्साहन, सुरक्षित यात्राको अनुभूति र साइकलमैत्री वातावरण खाँचो छ ।
लेखक रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका समाजशास्त्र विभाग प्रमुख हुन् ।
प्रकाशित : पुस १, २०७५ ०८:३०
असल नियतको अभाव
पुस १, २०७५ रोजिना पोखरेल
काठमाडौँ — ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ । म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’सिंहदरबारमा हरेक मन्त्रालयको मूलद्वारमा यी वाक्य देखिन्छन् । भ्रष्टाचार छ, हुन्छ तर अब म हुन दिन्नँ है भन्दै गराइएको प्रतिज्ञाले सदाचारितामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हेर्न बाँकी छ ।
इतिहासलाई साक्षी राख्दा व्यवहारगत परिवर्तन नगरे सम्म, नेतृत्ववर्ग उच्च नैतिकतामा नरहेसम्म लेखेर असल नियत आउँदैन भनेर सदाचार देखिँदैन । यस्ता प्रचारी चटकको अवधि पनि छोटो हुन्छ ।
परजीवी चरित्र परजीवीलाई अर्काको जीवन, अर्काको मूल्यको अर्थ हुँदैन । आफू बाँच्न उसले अरूलाई चुस्नैपर्छ, अरूलाई खानैपर्छ । परजीवीले आफ्नो आहार आफैं बनाउँदैन, मेहनत गरी सिर्जना गर्दैन, अरूलाई खोजी गर्छ ।
राजनीतिक दलका स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रस्तरका अधिकांश नेताको बाँच्ने आधार राजनीति बनेको छ । आफ्नो छुट्टै इलम, आयस्ता, व्यवसाय, स्रोत खोजी गर्न धेरैले ध्यान दिँदैनन् । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म स्तर, मापन फरक होला तर प्रक्रिया एउटै हो– आफ्नो पद, पहुँच देखाएर, राजनीति भजाएर गुजारा चलाउने र भविष्यका लागि जोहो गर्ने ।
परजीवीको नैतिकता, सदाचारिता हुँदैन । उसको कर्म, धर्म भनेकै अरूमा भर पर्ने, अरूलाई चुस्ने हो । इलम, पेसा, व्यवसायले मानवलाई संघर्ष, मेहनत, परिश्रमको महत्त्व बुझाउँछ तर राजनीति गुजाराको माध्यम बन्दा बजेट विनियोजन, कार्यान्वयनमा भागबन्डा, लुँछाचुँडी सामान्य बन्दै छ ।
मेरो बजेट, हाम्रो बजेट, हामीलाई योजना, हाम्रा लागि कार्यक्रम, हामीबाट सञ्चालनजस्ता पक्ष मजबुत हुँदा जनताका लागि समृद्धि टाढा देखिन्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले धेरै हदसम्म जनता, अगुवालाई परजीवी बनाउँदै आएका छन् । शारीरिक, बौद्धिक परिश्रम, मेहनत, दु:खबिनाको प्राप्तिले परजीवी संस्कारलाई बढावा दिन्छ ।
राजनीति पेसा, व्यापार होइन । यो सामाजिक सेवा, राष्ट्रिय योगदानका लागि आफ्नो दूरदृष्टिसहित जनताको समर्थन प्राप्त गर्दै सामाजिक अगुवाइ गर्ने पथप्रदर्शनको दर्शन हो । यसको नेतृत्व आफ्नो सिद्धान्त सम्हाल्दै सादा, सरल, आदर्श जीवन जिउँदै आम जनताका लागि मार्गदर्शक बन्छ भन्ने मान्यता हो ।
राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखको नैतिकताको सुई सिधा भए आम जनताले गौरव महसुस गर्छन् । जनता आफ्नो अभिभावकका रूपमा रहने नेतृत्ववर्ग अनुकरणीय बनेको हेर्न चाहन्छन् । ऊ व्यक्तिमुखी होइन, जनमुखी बनेको हेर्न चाहन्छन् । हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शिताको अपेक्षा रहन्छ । राजनीतिलाई पेसा, व्यवसायका रूपमा विकसित गर्दै लाँदा न्याय, नैतिकता र सदाचार हराउँदै आएको स्पष्ट देखिन्छ ।
विवादमा आउन नहुने सर्वोच्च पद समयसमयमा विवादमा तानिनु, व्यवहार तथा कार्य जनताको नजरमा सम्मानपूर्ण हुन नसक्नुजस्ता पक्षले नकारात्मक सोच मात्र वीजारोपण गर्न सक्छ । हिजो राजनीतिमा लाग्दा बोकेको सोच, सिद्धान्त, दु:ख र आश्वासन आज व्यक्तिगत, पारिवारिक र विलासितामा रूपान्तरण भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा कछुवा चरित्र
कछुवा सुस्त हिँड्छ । उसको आयु लामो हुन्छ । सुरक्षाका लागि जिउमाथि कवच हुन्छ । उसलाई कुनै हर्ष, विस्मात् देखिन्न । मात्र खान, रम्न र जम्न पाए पुगे हुन्थ्यो जस्तो गर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र त्यस्तै देखिन्छ । जागिर जाला भन्ने पिर छैन । सुस्त कार्यशैली, खालि खाने मुहान खोज्ने बानी छ ।
ट्रेड युनियनरूपी सुरक्षाकवच पहिरिएको कर्मचारीतन्त्र कसरी खरायो बन्ला ? पूर्व/बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कर्मचारीले असहयोग गरे, फाइल लुकाए, ढिला कार्य गरे भनिरहेका हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको नियत, नैतिकता र कार्यशैली नसुधारेसम्म समृद्धिको खाका कोर्न कसरी सहयोग पुग्ला ?
केही महिनाअगाडि एक जना आफन्त नोकरीको वृत्तिविकासमा आफूलाई आघात पुगेको महसुस गरी कानुनी उपचारका लागि काठमाडौंमा नाम चलेको एक वकिलको ल फर्ममा जानुभयो । म पनि साथमा थिएँ । वकिलले केही समय दिनुभयो ।
सबै कुरा सुन्नुभयो । कागजात हेरेजस्तै गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, ‘ठिकै छ, यी कागजात एक प्रति यहाँ छाड्नुस् । २ लाख पनि छाड्नुस् । मुद्दा प्रक्रिया बढाउँला अनि लाग्ने हिसाबकिताब पछि गरौंला ।’ म र मेरा आफन्त हेराहेर गर्‍यौं अनि हुन्छ, भोलि आउँला भनेर हिँड्यौं ।
यस्ता ल फर्म र अन्य सेवा प्रदायक निकायले माग्ने र लिने सेवा शुल्कको मूल्य अचाक्ली बढी छ । पेसागत आचारसंहिताले कतिसम्म सुहाउँछ, प्राप्त सेवाशुल्कको कर तिरिन्छ कि तिरिन्न, सर्वसाधारणले सेवा ग्रहण गर्न कत्तिको सक्लान् जस्ता पक्ष बहसमै छन् ।
गाली र आलोचना धेरै सरकारको हुन्छ तर राज्य सञ्चालन संयन्त्रमा सबै क्षेत्र, संस्था, पेसा, व्यवसायगत निकाय पनि सारथि हुन्छन् । तिनले अपनाएका नियत, नैतिकताले पनि समाज र देशमा कस्तो नतिजा ल्याउने भन्ने ठूलो भूमिका खेल्छ ।
समाज आफैं अनियमितताको कडा विरोध गर्छ, आफैं भ्रष्टाचारलाई मान्यता प्रदान गर्न पनि तत्लीन देखिन्छ । प्रक्रिया पुर्‍याउनभन्दा केही रकम खर्च गरी छिटो, छरितो काम सक्न पाए, सेवा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ व्यापक छ ।
कुन माध्यमबाट र कसरी मानिसले पैसा कमायो, कमाउँदै छ भन्नेतिर होइन, कमाइएको पैसालाई महान् ठानिने संस्कार समाजले विकास गर्दै छ । पैसा कमाउने, शक्ति प्रदर्शन गर्नेको राप, ताप लिन समाज अग्रसर छ । सरल जीवन जिउने, सानो आयस्ताबाट जीविका चलाउने, सानो इलम चलाउने, मेहनतबाट गुजारा चलाउने मानिस समाजको आदर्श पात्र बन्न नसक्ने हुँदै गएको छ ।
जसरी पनि पैसा कमाउने, धाक रवाफ लगाउने व्यक्ति सामाजिक जीवनमा सफल ठानिने संस्कार विकास हुँदै छ । सरलभन्दा विलासी जीवनलाई सफलताको सूचक मान्ने समाज विकास भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले देशको बेथिति, भ्रष्टाचारको उग्र विरोध गर्छ तर आफ्नो पेसा, व्यवसायमा पारदर्शी र कानुनबमोजिम व्यवस्थित गरेको खासै पाइन्न । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर होस् या ग्राहकबाट लिने नाफाको प्रतिशतजस्ता पक्षमा इमानदार पाइँदैनन् । सामाजिक दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।
प्राध्यापक, शिक्षक र अन्य विज्ञ वर्ग राजनीतिको फेरो नसमाते आफू छायामा पर्ने, मौका नपाउने मनस्थितिबाट गुज्रिएका छन् । राजनीतिक दलैपिच्छेका प्राज्ञिक जमात बनेका छन् । नैतिकता सिकाउने पाठशाला, विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक केन्द्र स्वार्थको खोजी गर्ने, व्यापारीकरण हुने दिशामा केन्द्रित छन् ।
राजनीतिक रङले असल प्राज्ञिक वर्ग स्वत: छाया र हेलामा पर्दै आएका छन् । नैतिकता सिकाउने जमातमै रोग पसेपछि बौद्धिक वर्गलाई समाजले कसरी पत्याउने ? संविधान, कानुन, नियम आदिमा लोकतान्त्रिक तवरबाट जनहितलाई ध्यान दिएर पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गरिए ।
सुशासन, असल व्यवस्था, भ्रष्टाचार निवारण र अनियमितता नियन्त्रण गर्न संस्थागत संयन्त्र, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाइए । ती कानुनी व्यवस्था, संयन्त्रको सन्तोषजनक नतिजा देखिँदैन । यसको मुख्य कारण तिनको प्रयोग र प्रचलनमा राखिने गलत नियत हो ।
प्रशस्त कानुन हुँदैमा कानुनी शासन, प्रशस्त राजनीतिक दल तथा नेता हुँदैमा असल नेतृत्व, प्रहरी–प्रशासन हुँदैमा भरपर्दो शान्तिसुरक्षा र अमनचयन, सेवाप्रदायक नजिक हुँदैमा चुस्त सेवा, स्कुल–विश्वविद्यालय हुँदैमा गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन भन्ने हामीले देखिसकेका छौं, भोगिसकेका छौं ।
सरकारको नेतृत्वमा नैतिकताको धर्म, अन्य निकायमा पेसागत मर्यादा र असल नियत हुनैपर्छ । संकीर्ण स्वार्थकेन्द्रित अनैतिक प्रवृत्तिको जालो नतोडिएसम्म चालिएका कदम, बोलिएका भाषण, देखाइएका सपना र लगाइएका समृद्धिका नारा अपुरै रहनेछन् ।
प्रकाशित : पुस १, २०७५ ०८:२८